Ii-FAQs - Foshan Chengpai Sanitary Ware Co., Ltd. '
Q: Liphi izibuko lokuthumela?
A: Ukuthunyelwa kwethu kwizibuko kuhlala Foshan Port, Guanghzou Port kunye Shenzhen Port.
A: Ihlala ixesha elingakanani intloko yeshawari?
B: Icoceke kangakanani intloko yeshawari kwaye luhlobo luni lwamanzi olukhoyo zizinto ezimbini eziya kumisela ukuba kufuneka kuthathe indawo engakanani ngaphambi kokuba intloko yeshawa ihlanjwe. Intloko yeshawari kufuneka icocwe kube kanye ngeveki kwaye kuya kufuneka ithathelwe indawo ukuba kukho nasiphi na isithintelo, ukungunda, okanye isilayidi esingafakwanga emva kokucoca. Kukho iingcebiso zokutshintsha intloko yeshawari minyaka le, ngelixa abanye besithi buyisela emva kweenyanga ezintandathu ukuze iibhaktheriya zingakhi kwaye zibangele ukulimala komsebenzisi.Njengoko kudibana ngentla apha, iwaranti yentloko yeshawari ene-LED yiminyaka emiBINI, iwaranti wentloko yeshawari ngaphandle kwe-LED yiminyaka emihlanu.
Q: Ngaba kunokwenzeka ukuba ii-functon ezimbini zisebenze ngexesha elinye?
A: Kuxhomekeka kwimodeli oyithengayo. Uninzi lweemodeli zinevalvu yokwahluka enye apho ukhetha umsebenzi omnye ngexesha. Nangona kunjalo ezinye iimodeli zitywinwe ngeendlela ezimbini zokujikajika ezikuvumela ukuba usebenze imisebenzi emibini ngaxeshanye.
Umbuzo: Intloko yam yeshawari ilahlekile ipateni. Ndenze ntoni?
A: Ukuba ufumana ipateni yokutshiza engaqhelekanga okanye ijet yokutshiza amanzi kwi-engile engaqhelekanga, enje nge-90 degree okanye ukutshiza ngecala, ihlala ibangelwa ngumngxunya wokutshiza ovaliweyo okanye ovaliweyo.
Umbuzo: Yintoni ekufuneka ndiyiqwalasele ngelixa ndifaka ishawa entsha?
A: Ewe, unoku-odola nabuphi na ubungakanani kwaye singalayisha isikhongozeli njengomyalelo wakho.
Q: Bungakanani ubungakanani bombhobho endiyifunayo kwintloko yokuhlamba, ½ '' okanye ¾ ''?
A: Intloko yeshawari ye-Chengpai icwangciselwe i-½ '' imigca yokuhambisa. Ukuba une ¾ '' imigca yokubonelela ungabanciphisa kwindawo yokuphelisa ukuya ku-½ ''.
Q: Ngaba singenza ikhonteyina yokudibanisa?
Q: Ndingenza njani ukufumana Led isampula iNtloko?
A: Nceda unxibelelane nathi kwaye wazise ngento oyifunayo.
Siza kwenza PI ngentlawulo yakho. Emva kokuba intlawulo ifunyenwe, siya kuyisa kuwe.
Q: Yintoni iNtloko yokuhlamba imvula?
A: Intloko yeshawari yemvula yenza ukuphuma kwamanzi kufane nemvula. Zonke iimodeli zeshawari zaseChengpai zivumela umsebenzisi ukuba alungelelanise ukuhamba kwamanzi ukuze ibe luhlobo lwemvula olulungeleyo. Ezi ntloko zeshawari zihlala zikhangeleka ngathi yidiski enemingxunya yerabha kuyo.
Q: Injani iphethini yokutshiza imvula?
IMPENDULO: Sisiphumo sokuthomalalisa kakhulu, ukutshiza okujolise ngakumbi kuninzi lwabantu ukutshintshela kwishawari, ukhetho oluhle lokuba nalo.
Q: Ngaba kunokwenzeka ukuba ube nesitya esihleliweyo ngaphezulu kweshawa kunye ne Chengpai bar mixer shawa?
A: Ewe, kukho iintlobo ngeentlobo zeemvula zeChengpai zokuxuba ezifumanekayo ezinezixhobo zentloko ezingaguqukiyo kubandakanya nesixubi sebha.
Q: Ngaba ndifuna ukubamba kaloliwe?
A: Ikhowudi yokwakha yengingqi inokufuna ukubanjwa kaloliwe. Esi sisongezo esongeziweyo esibekwe ezantsi kwizithuba, ezijolise ekunikezeleni ukubamba ngokulula kwabo benyuka benyuka izinyuko. Ukuba iprojekthi yakho ibandakanya izinyuko, kubalulekile ukujonga ukuba kufuneka ubambe oololiwe na kwindawo yakho.
Q: Yintoni endifuna ukuyijonga kakhulu xa ukhetha kwaye ufaka ishawa yokuxuba efihliweyo?
A: Jonga ukuba udonga luyakwazi na ukuhambisa umzila wemibhobho yamanzi kunye nesakhiwo kubunzulu besixubi esikhethiweyo. Qiniseka ukuba izinto ezishushu nezibandayo zingena kwiindawo ezichanekileyo kumxube ngaphambi kokwenza udonga lube lolungileyo. Qinisekisa xa utyabeka, uthayipha malunga neshawa yokuxuba efumanekayo kwaye itshekhi iivaluva ukuba ziyafikeleleka kulondolozo lwexesha elizayo
Q: Ingaba umenzi okanye ukurhweba inkampani?
A: Singumvelisi. Umzi-mveliso wethu ubekwe kwisixeko saseFoshan, kufutshane nesixeko saseGuangzhou kunye nesixeko saseShenzhen. Wamkelekile ukuba usityelele.
Q: Liliphi ixesha lokuhlawulwa kwentloko yeshawari ekhokelwayo?
A: 30% TT idipozithi kwangaphambili phambi kokuba imveliso, 70% ihlawulwe phambi kokuba unikezelo.
Q: Ngaba ukuvelisa iimveliso zethu uyilo?
A: Ngokuqinisekileyo, uyilo lwakho luyafumaneka ekuphuhliseni ukuba ufumana iisampulu kunye
Q: njani malunga nexesha lakho lokuhambisa?
A: Kuya kuthatha iintsuku ezili-10 ukuya kwezi-15 emva kokufumana idiphozithi kwangaphambili. Ixesha lokuhambisa elithile lixhomekeke kwizinto kunye nobungakanani beodolo yakho.
Umbuzo: Phambi kokuba ndakhe istayile sam, ndifuna ukwazi ukuba loluphi uhlobo lokungcolisa okungcono, i-stainless steel railing okanye i-aluminium railing?
A: Insimbi engenasici yinto ekhethiweyo yokuthuka kuba ibonisa amandla aphezulu kunye nobunzima xa kuthelekiswa ne-aluminium. Ukuthetha ngobuhle, intsimbi ibonelela ngezibonelelo ezicacileyo. Ngenxa yokuthamba kwayo, ialuminium ithambekele ekukrwemeni komhlaba kunye nemiphunga, isenza kube nzima ukuyicoca kunye nokuyigcina.
Umbuzo: Ndifumene ngamanye amaxesha amanzi aphuma kwimisonto yombhobho emva kwentloko yeshawari. Kwenzekani?
A: Ingxaki kukuba itywina alixinene ngokwaneleyo, cima intloko yakho yeshawari kumbhobho wokudibanisa uphinde ufake iteyiphu yeplumber, ekwabizwa ngokuba yi-teflon tape, kumbhobho. Sebenzisa nje isikrufu ukuqinisa intloko yakho yeshawari emva kumbhobho emva koko.